हुम्लामा जटामासीबाट बीस करोड आम्दानी « Rara Pati
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार
१४ कार्तिक, हुम्ला । हुम्लाका यो वर्ष बीस करोडभन्दा बढिको जटामासी सङ्कलन भएको छ । यसबाट स्थानीय गाउँ–ठाउँमा केही मात्रामा भए पनि अर्थ चलाएमान हुने आशा गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय हुम्लामा वन विभागबाट आएको जटामासी संकलन र निकासीको परिपत्रलाई आधार मान्दा यो वर्ष ३३४ टन जटामासी संकलन गरिने भएको छ । साउन यता परिपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको ७५ प्रतिशत जटामासी सङ्कलन भएको देखिन्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत सिमकोटमा पुगीसकेको डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख निरज झाले बताएका छन् ।
जटामासी सङ्कलनका लागि वन विभागमा प्रति केजी ५० रुपैयाँ राजस्व जम्मा गरी वन नीति नियमानुसारको प्रक्रिया पुरा गरेपछि निकासी पुर्जी पाइन्छ । यो वर्ष हुम्लामा जटामासी संकलन गर्ने हालसम्म दुई दर्जन फर्म पुगेका छन् ।
गाउँका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनका सम्बन्धित कार्यालयबाट लिइएको संकलन तथा निकासी पूर्जीको आधारमा जटामासी संकलन गर्ने नभई पेश्की दिए अनुसार जटामासी संकलन हुने गरेको विभिन्न जडिबुटी ब्यापारीहरूले बताएका छन् । तर गाउँबाट सिमकोट ल्याउँदा भने उक्त पुर्जी प्रयोग गरिन्छ ।
गाउँ–गाउँमा यसरी वैधानिक र अवैधानिक रूपमा नाम, काम र दाम खर्च गरेर जटामसी सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । तर यसको संरक्षण सम्बद्र्धन प्रचार–प्रसारमा कसैले ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय संरक्षणकर्ताहरूको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
हाल हुम्ला जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट सङ्कलन गरिएको जटामासीको लेखाजोखा गर्दा वनबाट गाउँ र गाउँबाट सिमकोट विमानस्थलसम्म पुगाउनका लागि प्रति केजी ६ सयसम्म खर्च हुने देखिएको छ । यो हिसाबले हुम्लामा बीस करोडभन्दा धेरैको जटामासी सङ्कलन भएको छ ।
बीस करोड आम्दानी
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल अब प्रतिलिटर रु ११६ कायम भएको छ । यस्तै, डिजल र मट्टितेल
घर जग्गाको कारोबार ह्वात्तै बढ्यो
कोभिडको समयमा ह्वात्तै घटेको घरजग्गा कारोबार पुसपछि बढेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार बैंकको ब्याजदर घटेको तथा
त्रिभुवन विमानस्थल कालोसूचीमा पर्ने सक्ने, यस्तो छ कारण
विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब १५ रोपनीसहित ९१ रोपनी ६
कुखुराको दानाको मूल्य बढ्ने, कति पुग्दैछ ?
भटमासको मूल्य अझ बढ्ने सम्भावना रहेकाले दानाको मूल्य अबको महीनामै बढ्न सक्ने संकेत उनले गरे
नेपाल अतिकम विकसित देशबाट माथि उठ्यो, स्तरोन्नतिपछि के फाइदा, के घाटा ?
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अतिकम विकसित मुलुकलाई तिरस्कृत किसिमको व्यवहार गर्ने गरिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीको अनुभव
औषधि विभागका अधिकृत दुई लाख घुससहित समातिए
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृतलाई घुसको